निदाउन सकिन जगदम्बा | चितवन पोष्ट
निदाउन सकिन जगदम्बा
सात प्याग लगाएर सुतेको हो ऊ, तर पनि छटपटियो । यता कोल्टे, उता कोल्टे पटक्कै आएन निद्रा । अहिले रातको एक बज्दैछ तर ऊ सपनामा होइन विपनामै छ । पत्नी जगदम्बा कुँइकेल मज्जासित घुरिरहेकी छन् । ऊ अर्थात् यो देशको निकै ठूलो मान्छे, शीर्ष पुरुष । जीवनमा यति सफल भयो कि उसको सफलता पराईलाई त के आफन्तहरुका लागि पनि इष्र्याको विषय बन्यो । ठूलै दलको नजिक रह्यो कुइँकेल, दलको शीर्षनेताको हरेक आवश्यकता पूरा ग¥यो । नगद, सुरा र सुन्दरीको ठेकेदार नै बन्यो । उसको आफ्नै मामा पनि पटक–पटक मन्त्री भएको । कुनै कुराको अभाव थिएन । जहाँ पनि पुग्यो । इज्जत पायो, पैसा कमायो । पैसाले धेरै प्वालहरु टाल्न सफल भयो । एउटा शुभलाभको पद पायो । आफन्तहरु घुसायो ।
पार्टीका अयोग्य झोलेहरु नियुक्त भए । तीन वर्षमा संस्था टाट भयो । सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारकै सदस्य हो, धनाढ्यमा गनियो । परिवर्तन देशलाई अभिशाप भए पनि उसका लागि बरदान बन्यो । अचानक उसका मन्त्री मामालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल चलान गरियो । उसको सम्पत्तिको पनि छानबिन भयो । प्रयाप्त प्रमाण नभएकाले जोगियो । दुई छोरा विदेशमा थिए । यताबाट पैसा उता पठाएर फेरि उताबाट कमएर यता पठाएको लेखा देखाइयो । दीर्घराज कुँइकेलले पनि प्रशस्त भ्रष्टाचार गरेकै हो । छोराहरु विदेशमा कुलतमा फसेका छन् । आफन्तहरुको घरमा बस्छन् । खर्च यतैबाट जाने हो । बाउले राष्ट्रलाई ठग्यो, छोराहरुलाई त्यो पापले पोल्यो । काठकै बाकसमा आउने सम्भावना । एक नागरिक चिया पसलमा । नेपालीहरु फुर्सदलाई यसरी सदुपयोग गर्छन् अरे ।
होइन हो, पण्डितजी यो नक्कली विद्वान दीर्घेको त प्रमाणपत्रहरु सबै नक्कली हो रे, आयातीत । यस्ता नक्कलीबाट यो देशले सक्कली काम कसरी पाउँछ हँ ? तल्लाघरे जेठा, समाचार बटुल्न माहिर । छोड जेठा, यो देशमा भिसी त चोरेर कुन्नी के पास गरेका छन् रे, उता प्रधानन्यायाधीशको पारा पनि त्यस्तै । राम्रोसित अनुसन्धान गरेमा निर्मोही व्यासको पिएचडी कारखाना संस्मरण सत्य प्रमाणित हुन्छ र धेरैको जागिर जान्छ । अचेल एमए पासहरु पनि ९० प्रतिशत पढेर होइन, सारेरै हो । पिएचडी भनेको भारतमा फाटा हुवा ढोल भन्छन् रे । झन् हेर त हे के निर्णय गरेको होला ? यी राष्ट्रपतिलाई पनि केही थाहा हुन्न कि क्या हो, कस्ता कस्ता काइतेहरुलाई पदक दिएको हो ? गतिलो समाचार एउटा पनि सुन्न पाइन्न । भित्तामा हिजोमात्र पाएको पदक झुण्डिइरहेछ । त्यही पदकले दीर्घराज कुँइकेललाई गिज्याइरहेछ । ऊ आफ्ना सार कुकृत्यहरु सम्झिरहेछ ।
सोझै जेलमा लान पर्ने हो उसलाई । सारै सोझो थियो दीर्घराज । स्कुलमा मास्टर थियो । कताबाट आयो बहुदल । फटाहा मामाको संगतमा प¥यो । अनेक कला सिक्दै गयो । मनमा लोभ पलाउँदै गयो । राजधानीमा घर, पजेरो सामान्य भयो । एउटा कुराको पछि लागेमा केही नपाइने र त्यसलाई त्यागे सबै पाइनेरहेछ । थाहा पायो । यति कमायो, यति कमायो कि ऊ आफैँलाई पनि मेसो भएन । त्यस्तै त्यस्तै पात्रहरुको नजिकमा पुग्यो । दीर्घजी अहिले नकमाए कहिले कमाउने ? यो देशमा राजा त जनप्रिय नभएर धनप्रिय छन् भने हामी किन सधैँ सुदामा बन्ने ? अरुले हुने हामीले नहुने ? वीर भोग्या बसुन्धरा । जसले हान्यो त्यसले जान्यो । जोगी हुन राजनीति गरेको हो र ? यसरी प्रेरणा पाएपछि ऊ पनि हौसियो । कानुन किन्यो । प्रहरी साथी भए ।
ठूला–ठूला पत्रकारहरुको कमजोरी पत्ता लगायो । कुन मन्दिरमा कुन अगरबत्ती बाल्नुपर्छ– कण्ठ । छापामारहरुले पनि उसलाई दुःख दिने दृष्टता गरेनन् । छापामारका नेताहरुको गोजीको साइज उसलाई थाहा थियो । नजिकका भूत टाढाका देवता सबैलाई प्रसाद चढाएकै थियो । नून खाएपछि नेपाली कति इमान्दार हुन्छन् त्यो उसलाई थाहा थियो । तर, यो निर्जीव पदक ! हो, यही पदक उसले आफ्नो लागि ठूलै व्यग्य भएको अनुभूत ग¥यो । पदकले गिज्याएझैँ मान्यो । एक मन त पदक नै लगेर कतै फाल्ने विचार पनि आयो । तर दुनियाँले थाहा पाएका छन् । राष्ट्रिय पोशाकमा सजिएर पदक लगाएको फोटो दुनियाँले देखेका छन्– फेसबुकमा ।
विचार, फेसबुकमा अनुहार पनि पतेराले चुसेको धानजस्तो । बधाई आयो फेसबुकमा, तर उसले मजाक गरेको ठान्यो । यो निर्णय अहिलेको सरकारले गरेकै होइन । फेसबुक हल्ला ! प्रतिपक्षलाई खुसी पार्न यो सरकारले यति उदारता देखायो । तर्कमाथि तर्क । हे राष्ट्रघाती दीर्घे, तँ यसको उपयुक्त पात्र होइनस् । ऊ भित्रको इमान बोल्यो । विवेकले उसलाई निदाउन दिएन । अझै छटपटियो । कति आनन्दको जागिर थियो स्कुलमा । गाउँको प्रदूषणरहित वातावरण आहा क्या थियो जिन्दगी । कहाँ यो नरकमा आइपुगेँ म । दाम र नामको चक्करमा आज आफ्नो आँखाबाट आफै झरे । खोइ मेरो मनमा शान्ति ? खोइ मेरो मुहारमा कान्ति ? पाप गरेपछि सजाय पाइनेरहेछ । योभन्दा ठूलो सजाय अरु के हुन्छ ? छोराहरुको हालत त्यस्तो छ । पत्नी पनि फजुलखर्ची र मनमौजी । म पनि नैतिकपतन, मैले मान्ने नेताहरु सबै भ्रष्ट ।
मैले संगत गरेका तथाकथित ठूलाबडाहरु पनि भ्रष्ट । हे भगवान् यो कस्तो चक्रव्यूह हो ? सम्झियो दीर्घराजले एउटा इमान्दार बालसखालाई । उसले स्कुलबाटै पेन्सन पकायो । छोराछोरी होनहार निस्किए । समाजले उसलाई ठूलो इज्जत दियो । सबैको मुखमा कृपा सर हो, उसको बालसखा कृपानाथ पराजुली गणित गुरु । कृपाले एक दिन भनेको थियो, हेर दीर्घे तँ गतिलो बाटोमा लागिनस् । अहिले त यो नक्कली इज्जतले तँ भित्रको विवेक आर्यघाट पुगेको छ, एक दिन होसमा आउनेछस्, तर धेरै ढिलो हुनेछ । मेरो वचन सम्झेर तँ रुनेछस् केटा । रोयो दीर्घराज । मनमा आगो, आँखामा पानी । यो सबै मैले कसको लागि गरेँ ? के पाएँ ? सम्मानको आँखाले कसैले पनि हेर्दैनन् ।
मसित टाढा टाढा हुन थाले सबै । झन् यो चुनावले त खुइय उफ ! तीन बजेछ । श्रीमतीको निद्रा खुल्यो । बाथरुम गएर आइन् । घडी हेर्न बत्ती बालिन् । पतिको अनुहारको गति देखेर तीनछक । आँखा ननिदाएको प्रष्ट । केही दिनयता दारुको मात्रा थपेको र राम्रोसित नबोलेको हुनाले पत्नीले पनि के भयो ? भनेर सन्देह गरेकी हुन् । ‘बूढा के भयो ? आज हजुर घुरेको थाहा पाइन । के भयो चुनावको टेन्सन हो ?’ पुलुक्क हे¥यो पत्नीलाई । मलिन अनुहार, सर्वस्व हारेको जुवाडेझैं । एकपटक पुलुक्क पदकतिर हे¥यो र बोल्यो, ‘निदाउन सकिन जगदम्बा !’